Sweden oo ka kaaftoomaysa shuruudaha qaabilaada socdaalka EU - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Wasiirka cadaaladda iyo socdaalka Morgon Johansson. sawir: Christine Olsson/TT
Sweden oo ka kaaftoomaysa shuruudaha qaabilaada socdaalka EU
Johansson: In tanaasul la isku sameeyo.
La daabacay fredag 12 maj 2017 kl 10.49
Sweden ayaa diyaar u ah in ay ka tanaasusho qodobo ka mid rabitaankeeda ahaa in lagu khasbo wadamadda midawga Yurub in ay qeybsadaan masuuliyada qaabilida dadka qaxoontiga ah.
Siyaasada qaabilada qaxoontiga ayaa hore uga dhalisay wadamadda midawga Yurub kala qeeybsanaan, iyada oo qaar ka mid ah wadamadda bariga Yurub oo Polen iyo Hungary ugu horeeyaan ay diidanyihiin qaabilida qaxoontiga. Sweden iyo wadamo ay ku jirto ayaa mudo dherer ku doodayey in wadamadda midawga Yurub lagu khasbo in ay qaabilaan qaxoontiga, laakiin hada ayaa la sheegay ina ay Sweden debcinnayso shuruudaheeda.
Laanta wararka ee radiyaha Sweden Ekot ayaa sheegtay in ay hada jirto soojeedin aan rasmi ahayn oo u suurtagelinaysa wadamadda aan doonayn qaxoontiga in ay diidi karaan qaabilaada qaxoontiga balse ay tahay in ay ka bixiyaan lacag qof walba oo ay diidaan inay qaabilaan. Qorshahan ayaa odhanaya in waddan walba la siiyo qeeyb qaxoontiga ay tahay in ay qaabilaan. Balse hadii aanay doonayn kalabadh ka mid ah qeeybtaas waa in ay qaabilaan halka qeeybta kale ay diidi karaan laakiin markaas waa in ay bixiyaan 600 000 oo karoon qofkiiba.
Morgan Johansson, wasiirka socdaalka Sweden ayaa sheegay in uu aqbalaayo qorshahan.
-Si aan u midaayno wadamadda midawga Yurub oo dhan waan in aan diyaar u ahaanno in aan tanaasulno oo aan waxna bixino waxna qaadanno.
Qorshahan cusub waxa kale oo lagaga doodayaa in la sameeyo waxa loogu yeedhay waddan seddexaad halkaas oo lagu celin karo dadka qaxoontiga ah, sida hada ka jirta Turkiga. Balse Sweden ay middan ka soo horjeedaa sida uu sheegay Morgan Johansson.
- Anaga muhiim ayey nootahay in ay xaalad wanaagsan ka jirto waddanka lala heshiinayo, markaas waan ka walaacsan nahay shuruudan. Tan waan ka soo horjeednaa, ayuu yidhi Johansson.